Muxuu ka dhigan yahay qoraalka beesha caalamka ee doorashada Soomaaliya? - Idman news
Muxuu ka dhigan yahay qoraalka beesha caalamka ee doorashada Soomaaliya?
Mohamoud 1 week ago 2 min read
Muqdisho (Caasimadda Online) – Beesha Caalamka ayaa Talaadadii war qoraal ah kasoo saartay arrimaha Soomaaliya, waxeyna walaac ka muujiyeen is-mari-waaga ka jira hirgalinta hanaanka doorashada ee horay loogu heshiiyay.
17-kii September waxaa dhacay heshiis ay wada gaareen dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxaana la isla jiheeyay hannaan doorasho oo lagu wada saxiixan yahay iyadoo laga soo saaray war murtiyeed.
Beesha Caalamka waxey sheegeen in heshiiskii lagu gaaray Muqdisho uu kaliya yahay kan lagu dabaqi karo arrimaha doorashooyinka.
Muddada xil heynta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka hartay wax ka yar 30 maalmood, walina la iskuma fahimin habka loo bilaabay doorashada, waxaana gaabiska uu ka yimid maadaama wali aan la isku fahmin wadada saxda ah ee loo marayo doorashooyinka.
Jibriil Aw Maxamed oo ah macalin wax ka dhiga jaamacad ku taalla dalka Mareykanka ayaa wax laga weydiyay qoraalka beesha caalamka waxa uu ka dhigan yahay.
“Ujeedadu waxey tahay inaan heshiiska dib loo furin oo aan loo noqonin habkii 2016, sidaas ayaa ku cad warqadda, waxaana jirta in maamullada qaar ay doonayaan in hal magaalo wax lagu doorto,” ayuu yiri Jibriil.
Mar wax laga weydiiyay sida la isku waafajin karo dhaqan galinta heshiiska iyo xalinta tabashooyinka hadda jira, wuxuuna yiri: “Waxyaabaha uu heshiiska dhigayo in sidooda loo hayo ayey doonayaan Beesha Caalamka, balse waxyaabaha farsamada ah sida guddiga lagu muransan yahay waa wax la badali karo hadii dood ka timaado, balse arrimaha lagu heshiiyay oo ah magaalooyinka la dhigayo kuraasta ee labada ah waa in la dhaqan galiyo maadaama heshiiska ay ku jirtay”.
Halkaan ka dhageyso wareysiga oo dhameysitran
Previous Mudaharaad ka dhashay wiil Soomaali ah oo lagu dilay UK+Cida Dilkiisa lagu xidhidhiyey
Next Hillary Clinton oo u ololeynaysa in la daawado muuqaal ku saabsan dilkii Jamaal Khaashuqji
DF oo Qaramada Midoobay u gudbisay xaaladaha ka jira Soomaaliya + Sawirro
Barnaamijka Ciyaaraha (21-01-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Ra’isul Wasaaraha XFS oo Kulan la Qaatay Hay’adaha Amniga iyo Maamulka G. Banaad…
Warka Duhur Shabelle Tv 21.01.2021
34 mins ago Mohamoud
Weeraryahan ka soo ciyaaray Premier League oo kashifay tababaraha ay Chelsea wada hadallada la billawday si ay ugu baddesho Frank Lampard – Gool FM
Ra’isul Wasaaraha XFS oo Kulan la Qaatay Hay’adaha Amniga iyo Maamulka G. Banaad… January 21, 2021
Warka Duhur Shabelle Tv 21.01.2021 January 21, 2021
This is what refinancing a mortgage can do to your credit score January 21, 2021
Weeraryahan ka soo ciyaaray Premier League oo kashifay tababaraha ay Chelsea wada hadallada la billawday si ay ugu baddesho Frank Lampard – Gool FM January 21, 2021
DF oo Qaramada Midoobay u gudbisay xaaladaha ka jira Soomaaliya + Sawirro January 21, 2021
Total visitors : 18,143